राजमार्गमै वालवालीकाको मनपरितन्त्र
डिसेम्बर ७, २००८
धादिङ जोगिमारा छेउमा पर्ने प्रिथ्वी राजमार्गमा स्कूले वालवालीकाले मनपरि बस रोकेर पैसा माग्दै गरेको फोटो हो यो । यि वालवालिका बढिमा १५ वर्षका छन । कतिपय दुध चुस्ने उमेरका । बिद्दालयलाई कुन्नी के के खाँचो पर्‍यो भन्दै...
“बेकुफ बनाते हो, किसी ने चुना लगा दिया”
डिसेम्बर १, २००८
अघिल्लो महिना पोखरा गईयो । ट्रेकिङ गर्ने सुर थियो तर अन्तत: गईएन। हुन त दर्जनौ पटक गएको हुँ म पोखरा । यसपाली छोरो आमोदसित घुम्ने रहर थियो । वालकलाई हिमाल नजिकै देखाउन कहाँ जाने त ? त्यहि...
ज्ञानेन्द्रको फोटो देखाएर दर्शालु तान्छन फोटोग्राफर
नोभेम्बर २८, २००८
राजतन्त्र समाप्त भयो । राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा भए । पारसको राजा बनौंला भन्ने सपना भाँडमा पल्टियो । त्यसलाई नेपाली जनतालेनै मिल्काएका हुन । तर राजतन्त्रको प्रभाव र आकर्षण भने सहजै किन मेटिन्थ्यो ? सायद यो तस्बिर त्यसैको...
शिविरभित्र छापामारको जिवन
नोभेम्बर १८, २००८
माओवादी जनयुद्दको प्रारम्भतिर म केहि पहाडी जिल्ला घुमेको थिएँ । माओवादी जनयुद्दबारे मुल उद्देश्य राखेर रिपोर्टिङ गर्न । त्यो बेला छापामार भेट्नु चन्द्रमा खसाल्नु जस्तो मानिन्थ्यो । छापामारलाई भन्दा आफुलाई पो बढि खतरा दुबै तर्फबाट । जिल्लामा...
नोभेम्बर १३, २००८
स्वदेशमा प्राय: पती पत्नी सँगै नाच गाउने कम हुन्छ । शहर बजारमा यदाकदा देखिएला तर गाउँमा पतीका अगाडि नाच्नु भनेको डर, संकोच र लाजको विषय हो । नेपालमै भइरहेको भए सासू ससुरा, नन्द जेठाजु, भाउजु र तिपनि...
लौ लिनुस आआफ्ना तस्बिर
नोभेम्बर ११, २००८
अस्ति भएको देउसी भैलोका सबै तस्बिर राखेको छु बल्ल । यहाँ क्लिक गरेर फोटो एलबममा छिर्नुहोस र आफुलाई मन परेका तस्बिर लिनुहोस । तर सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुभयो भने “फोटो-ददिराम सापकोटा ” भनेर अनिवार्य लेखिनु पर्ने छ...
नोभेम्बर ९, २००८
हुनत देउसी र भैलो खेल्ने बेला गयो नेपालमा । तर फ्रान्समा भने बल्ल मच्चिरहेको छ । नेपाली पर्वका दिन यहाँ नेपालीले छुट्टी पाउँदैनन । अनि आफ्नो अनुकूल पारेर मनाउने गर्छन बिदेशमा नेपालीहरु ।...
पेरिस, फ्रान्स,१२ कात्तिक २०६५ एनआरएनए फ्रान्सको आकस्मिक तथा आपतकालिन कोषकालागि रकम सँकलन गर्ने उदेश्यले पेरिसमा देउसी भैलो कार्यक्रम शुरु भैरहेको छ । गएको शुक्रवार देखि शुरु भएको यो कार्यक्रम हरेका साताका शुक्रबार बेलुका, शनिबार...
बिदेशमा एक्लै नेपाल चिनाउँदैछन सांगे शेर्पा
अक्टोबर २६, २००८
नेपालका सांगे शेर्पा अहिले फ्रान्स पुगेर नेपाल चिनाउँदै छन । एक्लो ब्यक्ति । एक्लो प्रयास । एक्लै मेहनतमा । खुशिको खबर होइन त यो ? पौभा पेन्टिङ गर्ने उनले फ्रान्समा एक्लै प्रदर्शनी गरेछन । त्यसको समाचार...